प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बाेधनका बहाना गर्दै पढे सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम - Tamang Online
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बाेधनका बहाना गर्दै पढे सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम
काठमान्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रकाे नाममा सम्वाेधन भने पनि घुमाउराे पाराले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपालकाे संविधानमा बजेट आउनु भन्दा दुइ हप्ता पहिले संसदमा राष्टपति मार्फत सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ । याे पटक सरकारले संसद विघटन गरेकाेले बजेट अधिवेशन नबाेलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
राष्ट्रका नाममा दिएकाे सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले यस अघि भन्दै आएका बिषयहरू नै दाेहाेर्याएका छन। उनले पाटीका आन्तरिक कलहदेखि संसद बिघटन गर्नुकाे बाध्यतालाई दाेहाेराएका छन् भने सरकारले तीन बर्षमा गरेका कामहरूलाई सविस्तार बर्णन गरेका छन् ।
आफ्नाे नेतृत्वकाे सरकारले गराएकाे निर्वाचनमा सहभागी नहुने भन्दै आएका बिपक्षीलाइ सर्वदलीय सरकारका लागि अनुराेध गरेका छन् । तर सर्वदलीय सरकारकाे नेतृत्व भने आफैले गर्ने बताउदै आएका छन् । उनले पहिलाे खाेप लगाएर समयमा दाेश्राे खाेप नपाएका नागरिकका लागि जसरी पनि खाेपकाे व्यवस्था गरिने आश्वासन दिएका छन् । यसैगरी भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीलाई आक्रमण गर्नेहरूलाई सुरक्षाकर्मीलाई आक्रमण गरिएकाे सरह मानेर कारवाही गरिने पनि बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीकाे सम्वाेधनकाे पूर्ण पाठ यस्ताे छ
१. गएको २० गते कोभिड महामारीको दोस्रो लहरका सम्बन्धमा यहाँहरूसँग सम्वाद गरेको थिएँ। कोभिडको यो लहर निकै सङ्क्रामक र बढी घातक रहेको एवं यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालित गरिएको बताएको थिएँ। सङ्क्रमणको साङ्लो चुँडाउन निषेध आदेशको पालना गर्न र महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदममा साथ दिन आग्रह गरेको थिएँ।
३. समाधानका लागि हामीले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्‍यौं। त्यसले गर्दा अहिले स्थितिमा सुधार आएको छ। भारतबाट लिक्विड अक्सिजनको नियमित र थप मात्रा आपूर्ति हुन थालेको छ। अन्य उद्योगमा रहेका हजारौं अक्सिजन सिलिण्डर सङ्‍कलन गरी अस्पतालहरूमा पठाइएको छ। अक्सिजन प्लान्टहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्‍चालन गरिएको छ। अक्सिजन उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकको जीवनरक्षाका लागि विदेशबाएयरलिफ्ट गरेर समेत सिलिण्डर ल्याइएको छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न पर्याप्‍त रकम पठाइएको छ। मित्रराष्‍ट्रहरूको सहयोगमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा भेण्टिलेटर र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्री भित्रिएका छन्।
« तामाङ समाज अमेरिकाको कार्यसमिति पुनर्गठन,संयोजकमा सन्त बहादुर तामाङ (Previous News)
(Next News) तामाङ घेदुङले कोरोना स्वास्थ्य अभियानको लागि एक लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण »